प्रदेश ६ ले आफ्नो नाम र राजधानी टुंगाए पनि अन्य प्रदेश अन्योलमै छन् । प्रदेश सभाको दोस्रो बैठकले नै प्रदेश ६ को नाम कर्णाली र राजधानी वीरेन्द्रनगर राख्न सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । नाम र राजधानी टुंगो लगाउन प्रदेश ३ र प्रदेश ४ ले समिति बनाएका छन् । प्रदेश १, प्रदेश २, प्रदेश ५ र प्रदेश ७ अहिलेसम्म […]
काठमाडौं, ३० वैशाख । खाना पकाउने एलपी ग्यास पछिल्लो तीन वर्षमा बजारमा ४० लाखले वृद्धि भएको..
काठमाडौँ, ३० वैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रसिद्ध धार्मिकस्थल मुक्तिनाथ म..
काठमाडौँ, ३० वैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग..
काठमाडौं, ३० वैशाख । जेलमा रहेका एक कैदीले कैदमुक्त हुन अदालतको नक्कली फैसला पेश गरेका छन्..
काठमाडाैं, ३० वैशाख । १२ निकुञ्जमध्ये आम्दानी र पर्यटक आगमन बढी हुने चितवन निकुञ्जको प्रमुख चयनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र उनका भाइ नारायण दाहालसम्मले चासो देखाएका छन् । नारायण पूर्वसभासद हुन् । चितवनमा वार्षिक दुई लाख हाराहारी पर्यटक भित्रिन्छन् भने करिब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व जम्मा हुन्छ । आम्दानीको ५० प्रतिश..
काठमाडौँ, २९ वैशाख । केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले योग्यता र दक्षताका आधारमा कर्मचारी छनोट गरी ख्याति कमाउँदै आए पनि अब प्रदेशमा गठन हुने प्रदेश लोकसेवा आयोगहरू भने भर्तीकेन्द्र बन्न सक्ने देखिएको छ। संविधानको धारा २४४ को उपधारा १ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन हुने व्यवस्था छ। लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले भने,..
काठमाडौं, २९ वैशाख । नेपाली सर्ट मुभिकी नायिका सरिना शर्मा (नाम परिवर्तन) प्रेमीसँग खुसी थिइन् । उनीहरु काठमाडौंमै लिभिङ टुगेदरमा थिए । त्यसो हुँदा दुईबीच सबै खालका सम्बन्ध भइसकेका थिए । यही क्रममा दुईबीच राजीखुसीसँगै शारीरिक सम्बन्धको भिडियो खिचियो । भिडियो दुवैले सेयर गरे। दुईबीच विवाहको कुरा चल्दै थियो । अचानक खटपट भयो । बोलच..
काठमाडौँ, २९ वैशाख । काठमाडौं महानगरपालिकाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई शनिबार महानगरको कलात्मक साँचोको प्रतिक दिने भएको छ। दुई दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा मोदीलाई मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नागरिक अभिनन्दनका क्रममा ‘काठमाडौंको कलात्मक साँचो’ हस्तान्तरण गर्ने भएका हुन्। शाक्यले नागरिक अभिनन्दन पत्र वाचन गरी मोदीलाई उक्त ..
काठमाडौं, २९ वैशाख । उपत्यकाभित्रै रहेका तरकारी बजारमा तरकारीको मूल्य फरक फरक पाइएको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार र अन्य तरकारी बजारमा अनुगमन गर्दा एउटै तरकारीको मूल्य पनि फरक फरक पाइएको हो । तरकारी व्यवसायीहरूले तरकारीको मूल्य निर्धारणमा मनोमानी गर्दा आपसमा जोडिएर रहेका पसलमै समेत तरकारीको मूल्य फरक फरक हुने गरेको छ । [..
काठमाडौँ, २९ वैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पटनाबाट हेलिकोप्टर चढेर जनकपुर आउने तालिका परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसैअनुसार निर्धारित समय बिहान सवा १० बजे जनकपुर विमानस्थलमा हेलिकोप्टरको प्रतीक्षा भइरहेको थियो । तर उक्त समयभन्दा १० मिनेटपछि जनकपुरको आकाशमा एटीआर विमान देखियो । जसमा थिए, मोदी । उन..
काठमाडौँ, २९ वैशाख । भारतका सरकारी र निजी कम्पनीले नेपालमा लाइसेन्स लिएका जलविद्युत्त आयोजनाको क्षमता ५० देखि ९ सय मेगावाटसम्म छ । केही निजी कम्पनीले नेपाली कम्पनीसँगको संयुक्त उपक्रम (जेभी) समेत गरी ठूला जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स लिएका छन् । भारतीय कम्पनीले नेपालका अधिकांश ठूला, मझौला र साना जलविद्युत्त आयोजनाको लाइसेन्स लिएक..
काठमाडौँ, २९ वैशाख । दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भइरहेका बेला धेरैजसो निजामती कर्मचारीले ती स्थानमा जान मानेका छैनन् । दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा कामकाज गरेका अधिकांश कर्मचारीले सुगम स्थानीय तहमा मात्र काम गर्न सरकारसँग निवेदन दिएसँगै दुर्गम स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीको अभाव झनै हुने भएको हो । सरकारले ..
काठमाडौं, २९ वैशाख । जनकपुरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले लगाएको पोसाक मिल्नुमा संयोग थियो कि आकस्मिकता ? शुक्रबार दिनभर ओलीको पोसाकको आलोचना भयो, तर कुरा बेग्लै थियो । एमाले नेता राजन भट्टराईका अनुसार मोदीले लगाएको पोसाक ओलीले पठाइदिएका थिए । हातले बुनेका दुवै नेताका मैथिली पोसाक काठमाडौंमै सिलाइएका ..
काठमाडौं, २९ वैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारतबीच रहेका सबै समस्यालाई आगामी सेप्टेम्बर १९ भित्र सम्बोधन गर्ने सहमति भारतसँग भएको बताएका छन् । समस्या समाधानका लागि छिट्टै दुवै देशका परराष्ट्रसचिवले कार्य प्रारम्भ गर्नेसमेत उनले बताए । ‘सबै समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको छ, जुन दिन संविधान दिवस पर्छ अर्थात राष्ट्रि..
काठमाडौँ, २८ वैशाख । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भित्रिएको साढे ३३ किलो सुन तस्करी र सनम शाक्य हत्याकाण्डका अभियुक्तको बयान सकिएसँगै जिल्ला अदालत मोरङमा बिहीबारबाट थुनछेक बहस शुरू भएको छ। जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका तर्फबाट आरोपितहरूलाई थुनामै राखी मुद्दाको प्रक्रिया अ..
काठमाडौँ, २८ वैशाख । राजनीतिक र धार्मिक भ्रमणका सिलसिलामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रोपटक आज शुक्रवार नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। जानकी मन्दिरमा हुने विशेष पूजा–आजा, नागरिक अभिनन्दन ग्रहण गर्दै उहाँले रामायण सर्किटको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ। भारतका करिब एक दर्जन धार्मिकस्थलसहित, श्रीलंकाका धार्मिकस्थल, नेपालको जनकपुर र ..
काठमाडौँ, २८ वैशाख । भारतीय प्रहरीले एकजना व्यापारीलाई अमेरिकी अन्तरिक्ष निकाय नासामा काम गर्ने गरेको बताउँदै ठगी गर्न स्पेस सुट लगाएर परेड गर्ने एक जना र उनका छोरालाई गिरफ्तार गरेको छ। ती बाबुछोराले विशेष गुणहरुले परिपूर्ण भन्दै ती व्यापारीलाई २ लाख १३ हजार १ सय ५६ अमेरिकी डलरमा एउटा तामाको प्लेट बेच्न सफल भएको प्रहरीले [&hell..
सप्तरी, २८ वैशाख । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका नियम तथा मापदण्ड अपनाउँदै आएको भए पनि सप्तरीमा भने पुरानै रबैया कायमै छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठयक्रम विकास केन्द्रको शैक्षिक सत्र २०७५ का लागि पाठ्य सामग्रीका रुपमा प्रयोग गर्ने पुस्तकको मापदण्ड निर्धारण गरी विभिन्न प्रकाशन संस्थाको पुस्तकलाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ ..
काठमाडौं, २७ वैशाख । जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, काठमाडौंले ललितपुर र भक्तपुरका पनि धाराको पानी नमुना संकलन गरेको थियो । तीमध्ये ७० प्रतिशतमा हानिकारक जीवाणु भेटिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले बताए । देशभर ६ सय ट्यांकर सञ्चालित छन् । त्यसमध्ये काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले पाँच सय आठ ..
काठमाडौँ, २७ वैशाख । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भए पनि घोषितरूपमा पार्टी एकीकरणको मिति तय हुन सकेको छैन। दुवै पार्टीले अन्तिम तयारी पुगेको दाबी गरिरहँदा पार्टी एकतामा अझै कुरा मिल्न सकेको छैन। पार्टी एकताका लागि समान हैसियतमा कुरा मिल्न सकेको छैन। प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका नेकपा एमालेका अध्य..
काठमाडौँ, २७ वैशाख । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा ४ वटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन्। तीमध्ये कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७५ र संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश २०७५, राष्ट्रियसभा निर्वाच..
काठमाडौं, २७ वैशाख । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपाल भ्रमणका बेला जेड तहको सुरक्षा दिइने भएको छ । मोदीको नेपाल भ्रमणका समयमा पाँच प्रकारका सुरक्षा चुनौती औंल्याउँदै सरकारले यो तहको सुरक्षा दिने तयारी गरेको हो । जेड तहको सुरक्षा सर्वोच्च सुरक्षा बिन्दु हो । विश्वमा यस्तो सुरक्षा भारतीय प्रधानमन्त्री, चिनियाँ राष्ट्रपत..
काठमाडौँ, २७ वैशाख । प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ईश्वर देखाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । बुधबार सरकारले पेश गरेका तीन वटा अध्यादेशलाई अस्वीकृत गर्ने प्रस्ताव पेश गरेका सुवालले संसदमा ईश्वरको खोजी गरेका हुन् । मुख्यतः सपथको भाषामा ‘ईश्वरका नाममा सपथ खानेछु’ भन्ने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै ..
काठमाडौं, २७ वैशाख। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुर बिरामी हुँदा राजपामा सुनसान देखिएको छ । पार्टीका गतिविधि शून्य झैं भएका छन् । गत वैशाख ८ गते बस्ने भनिएको राजनीतिक समितिको बैठक अझैसमम बस्न सकेको छैन । पार्टीले संसदीय दलको नेता पनि चयन गरेको छैन । भारतको मेदान्त अस्पतालमा मुटुको एञ्जिग्राफीको अप..
काठमाडौं, २७ वैशाख । राजधानीमा बसिरहेका उज्ज्वल प्लस टु पास गरेपछि परिवारसँगै अस्ट्रेलिया गए । उनी मेलबर्नमा बस्न थाले, परिवार अर्कै राज्यमा । ८ कक्षा पढदै मदिरा पिउन सिकेका थिए । अस्ट्रेलिया गएपछि झन् स्वतन्त्र भए, मदिरा सेवन बढाउँदै गए । ‘पढाइमा मन गएन, बरु कुनै काम गर्छु भनें,’ बूढानीलकण्ठस्थित एक पुनस्स्थापना केन्द्रमा बसिरह..
काठमाडौं, २७ वैशाख । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले आफूसँग बाँकी रहेको दोस्रो र एकमात्र बोइङ जहाज पनि बिक्री गर्ने घोषणा गरेको छ । दुईमध्ये पहिलो बोइङ यसअघि नै उसले बेचिसकेको छ । निगम व्यवस्थापनले दोस्रो बोइङ बिक्री गर्ने उदेश्यका साथ जहाजको मूल्यांकनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । २१ दिने म्याद दिइएको उक्त प्रसतावअ..
नेविसंघमा चुलियो विवाद !
काठमाडाैं, २६ वैशाख । कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेविसंघमा संस्थापन पक्ष र संस्थापनइतर पक्षबीच विवाद बढेको छ । नेविसंघका अध्यक्ष नैनसिंह महरको कार्यशैली र व्यवहारबाट असन्तुष्ट वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर नेविसंघ पदाधिकारी र सदस्यहरूले समानान्तर बैठक र कार्यक्रम चलाउन थालेका छन् । केही दिन..
सिलिङले थेगेन बजेटलाई
काठमाडाैं, २६ वैशाख। आगामी आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमाभित्र रहेर बजेट नआउने भएको छ । बजेट तयारीका क्रममा आएका धेरैजसो सुझावलाई समेट्ने प्रयासमा सरकार लागेका कारण बजेटको सीमा बढ्न थालेको हो ।आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई १२ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा दिएको थियो । चालु आवभन्दा ७५ अर्ब कममा बजेट ल्याउने प..
काठमाडौं, २६ वैशाख । भारतले चीन, हङकङ, मकाउ, पाकिस्तान र माल्दिभ्सबाट भारत जाने वा भारत भएर स्वदेश फर्किने नेपाली नागरिकलाई भिसा अनिवार्य गरेको छ । राजनीतिक तहमा सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको ठानिएको वेला भारतले अनपेक्षित व्यवहार गरेको छ । तेस्रो देशबाट नेपाल आउन वा नेपाल हुँदै भारत फर्किन भारतीय नागरिकले नेपालको भिसा लिनु पर्दैन । त..